Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Jack Grealish Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Ahụike Untold
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye a maara nke ọma dị ka "Jack“. Anyị Jack Grealish Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị ama ama site na mgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị.
Akuko Jack Grealish Akụkọ nwata- Nyocha rue ụbọchị. Ebe E Si Nweta ka IG, Twitter, Gburugburu na Vice.
Nchịkọta ahụ metụtara ndụ ya, mmalite ezinụlọ, ndụ ọrụ ọhụụ, ụzọ ya maka akụkọ ama ama, ibilite na ama akụkọ, mmekọrịta, ndụ onwe ya, ndụ ezinaụlọ ya, ndụ ya wdg
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike o nwere ịgba ọsọ na ịgba ndị na-agbachitere ya n'oge gara aga. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle akụkọ ndụ Jack Grealish nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị ọzọ ado, ka anyị malite.
Jack Grealish Akụkọ nwata banyere ihe ndị ọzọ banyere akụkọ ndụ ya - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ
Bido n’elu, amụrụ Jack Peter Grealish n’ụbọchị 10 nke Septemba 1995 nye nne ya Karen Grealish na nna Kevin Grealish n’obodo Birmingham, United Kingdom. N'okpuru ebe a bụ foto mara mma nke ndị nne na nna Jack Grealish bụ ndị na-ele anya na ngwụcha oge 40 ha.
Ndị nne na nna Jack Grealish- Karen na Kevin Grealish
Onye amụrụ na English na Irish ezinụlọ mgbọrọgwụ mụrụ dịka nwa mbụ nke ụmụ atọ nne na nna ya Karen na Kevin bụ ndị Katọlik ji okpukpe ha kpọrọ ihe. Amuru ya umuaka nwere obi uto nke nwere uto mbu obula.
Agbanyeghị na a mụrụ ya na Birmingham n'ime ezinụlọ klas, a zụlitere ya na nwanne ya nwoke bụ Kevan Grealish na ụmụnne nwanyị- Kiera na Holly. O toro na Solihull, nnukwu obodo dị na England ma bụrụkwa ebe osisi na - emepụta ụgbọ ala ama ama ama na-emegharị ụkwụ anọ. Land Rover.
Jack Grealish Ebe ọmụmụ. Ebe e si nweta WorldAtlas
Oge ndụ Jack na-etolite na Central England bụ nke ọdachi kpatara. Grealish hụrụ ọnwụ nke nwa nwoke nwanne ya nwoke nke ana-akpọ Keelan Daniel Grealish. Ọ nwụrụ mgbe obere Jack dị naanị afọ anọ. Little Keelan Daniel sere n'okpuru ebe a nwụrụ ọnwụ COT mgbe ọ dị ọnwa itoolu na Eprel 2000.
Jack Grealish nwụrụ obere nwanne ya mgbe ọ dị afọ anọ. Ekele diri IG
Dịka Google si tinye ya, ụdị ọnwụ a maara nke ọma ọrịa nwa nwụrụ na mberede (SIDS) bụ okwu ejiri kọwaa ọnwụ nwa nwụrụ n’oge ụra ya ebe enweghị ihe kpatara ya ma ọ bụ ihe kpatara ya.
Jack Grealish Akụkọ nwata banyere ihe ndị ọzọ banyere akụkọ ndụ ya - Nkụzi na ịrụ ọrụ
Ibi na Solihull hụrụ ezinaụlọ Jack Grealish na mgbakwunye ụmụaka sitere na ezinụlọ ndị Katọlik ebe ụmụ ha na-aga Ladylọ Akwụkwọ Primary Roman Catholic. Grealish nwere ihe ịga nke ọma n'egwuregwu mgbe ọ nọ n'ụlọ akwụkwọ, nke mere ka mkpebi ya ịgbaso football. N'ikwu okwu banyere ịgba bọl, onye ọ bụla nọ n'ezinụlọ Jack Grealish bụ ndị egwuregwu Aston Villa.
Jack nwere onye egwu Aston Villa kachasị amasị ịbụ Paul Charles Merson, onye bụbu onye egwuregwu nke hụrụ ihe ịga nke ọma dị ka onye na-agba bọl na bọọlụ nke Aston Villa. Paul mechara bụrụ pundit nke telivishọn Bekee na SkySports. N'okpuru bụ foto Jack na uwe Aston Villa ya na nwa nwanne ya na arụsị football ya Paul.
Jack Grealish (n'aka ekpe) dịka nwatakịrị, ya na nwanne nne ya Sean Mills na Paul Merson (etiti)
Laa azụ n'oge ahụ, ụmụ nwoke abụọ ahụ mepụtara omume nke ichere n'èzí ebe ọzụzụ Villa iji see foto na Paul Merson, arụsị ha nke mere 101 Premier League gosipụtara Villa site na 1998 ruo 2002.
N'ịchọ ịga ọzụzụ ogige Villa, nwa na-eto eto weere ọzụzụ ịgba bọọlụ iji gbasoo usoro Paul Merson. Isoro ndị enyi na-egwu bọl obodo ahụ hụrụ ya abụghị naanị ka o zuo oke na nkà ya, fịsa bọọlụ ya agaghị eme ihe ọ bụla. Ndị ahụ bụ ụdị ihe yiri nke onye ọkpọ ọkpọ.
Jack Grealish Akụkọ nwata banyere ihe ndị ọzọ banyere akụkọ ndụ ya - Ndụ Ndụ Mmalite
Ọ joyụ nke ezinụlọ Jack Grealish enweghị oke mgbe ha hụrụ ọnwụnwa ha na-agafe onwe ya nke nwere agba na-efe efe ma tinye onwe ya aha na ebe agụmakwụkwọ Villa.
Jack Grealish- Life Career Life na Villa Academy. Ekele diri IG.
Inye bọọlụ mbido bụ ihe nne na nna Jack Grealish chọrọ maka nwa ha nwoke. Mgbe ọ na-egwuri egwu maka agụmakwụkwọ Aston Villa, Jack gara n'ihu na agụmakwụkwọ ya dịka ndị mụrụ ya dụrụ ya ọdụ na-achọghị ka ọ rapara naanị bọl. Bjikọta ụlọ akwụkwọ na ọrụ football hụrụ Grealish na-achụ ọtụtụ àjà, si otú a na-agbazi onye na-agụ akwụkwọ agụmakwụkwọ n'etiti ndị otu egwuregwu ya.
Foto Ezinụlọ Jack Grealish
Jack meriri iko mbụ ya mgbe ọ dị afọ 7. Ị maara?… Enyere ya onyinye otuto ya n'ụlọ akwụkwọ ya iji sọpụrụ nwanne ya nwoke nwụrụ anwụ Keelan. Inye onyinye a mere ka ụlọ akwụkwọ ahụ sọpụrụ obere nwanne ya ka ha mebere “Akwụkwọ ncheta ncheta Keelan Daniel Grealish”Nke a na-eji ugbu a na-akpado asọmpi ụlọ ha.
Jack Grealish Akụkọ nwata banyere ihe ndị ọzọ banyere akụkọ ndụ ya - Akpanwu akwukwo akuko
Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ na Our Lady of Ọmịiko nke Roman Catholic Primary School na Solihull, Jack gara n'ihu na ụlọ akwụkwọ sekọndrị ya ọbụna dị ka onye na-egwu egwuregwu na St Peter's Roman Catholic Secondary School. O kwenyere ndị mụrụ ya na ụlọ akwụkwọ sekọndrị ga-abụ njedebe ikpeazụ ya, mkpebi a kwenyere na ọ ga-enyere ya aka itinye uche na ọrụ ya.
Oge 2012 – 2013 bụ oge ntụgharị maka ọrụ Jack Grealish ka ọ na-enyere ndị otu ya aka ka ha merie NextGen Series. Chọta n'okpuru oge ha mere ememme ọhụụ.
Jack Grealish- Inyere ndi otu ya aka inwe mmeri nke 2012 – 13 NextGen. Ebe E Si Nweta nye Birmingham Mail
Emere ememme a site na 24 mba dị iche iche gafee Europe site na 15th nke August 2012 ruo 1st nke Eprel 2013. Mmeri a mere ka amata onye Bekee na Ireland n’inweta ọkpụkpọ oku dị elu na ọkpụkpọ oku ọzọ iji nọchite anya ndị otu mba ya nke Ireland.
Jack Grealish Akụkọ nwata banyere ihe ndị ọzọ banyere akụkọ ndụ ya - Na-ewu ewu Akụkọ
N'agbanyeghị ọnọdụ mba ahụ mgbe ọ gbanwechara si Ireland gaa England U21 team, Jack na 2016 nyeere ndị otu ya aka inweta mmeri Toulon Touament a ma ama.
Jack Grealish na ndị otu egwuregwu na-eme ememme 2016 Toulon Tournament
Grealish mgbe asọmpi ahụ gara n'ihu na-enwu dị ka onye ọkpụkpọ ọkpọ na onye na-awakpo Villa. E togowo ya maka ikike o nwere ịgba ọsọ na dịka ụfọdụ ga - akpọ ya, mmụọ na-agafe ndị iro ya. N'ihi nsonaazụ nimble ya, ọ kwụghachiri ụgwọ dịka ọ ghọrọ onye ọkpụkpọ egwuregwu mbụ ma emesịa bụrụ onyeisi. Dịka onye ndu, Jack duuru ndị otu ya n'ịchịkọta klọb 10 klọb n'usoro n'usoro.
Jack Grealish Bilie na Aston Villa
Ọzọkwa, ọ duziri akụkụ ya Villa n'ụdị ebe play-offs ebe mmeri ndị meriri ya na-eme ka ha bulie elu na Premier League mgbe ọ nọrọ afọ atọ. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Jack Grealish Akụkọ nwata banyere ihe ndị ọzọ banyere akụkọ ndụ ya - Ndụ mmekọrịta
Akpata akụkọ mgbe ochie nke Aston Villa, enwere enyi nwanyị dị egwu bụ onye anya Sasha Attwood.
Jack Grealish na enyi ya nwanyị- Sasha Attwood. Ebe e si nweta ya Gwa.
Jack Grealish zutere enyi ya nwanyị mgbe ọ nọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị. Ha bụ ụmụaka dị afọ iri na ụma gbakọrọ aka ọnụ na St Peter's Roman Catholic Secondary School na Solihull. Ha nọkọtara ọnụ kemgbe (dịka n'oge edere), akara nke mmekọrịta na-enweghị ihe ngosi.
Sasha Attwood bụ ihe atụ sitere na Birmingham. Ọ malitere ọrụ ya mgbe onye nnọchi anya gụsịrị ya na 13 mgbe ya na nne ya na-aga ịzụ ahịa n'obodo ha. A na-abanye Attwood ugbu a na MOT Models, otu n'ime ndị isi ụlọ ọrụ ihe ejiji ejiji London na Europe.
Jack Grealish Akụkọ nwata banyere ihe ndị ọzọ banyere akụkọ ndụ ya - Ndụ nke Onye
Kedu ihe na-eme Jack Grealish akara?. Nọdụ ala ma zuru ike ka anyị na-enyere gị aka ị nweta nkọwa zuru oke banyere ụdị onye ọ bụ n'ọdụ egwuregwu.
Na-amalite, mgbe ọ na-abịa na kpakpando egwuregwu, isiokwu “ndi mara mma n’agba ukwu”Na-abụkarị n'etiti okwu onye ofufe na-amasịkarị. Ọtụtụ ndị egwu hụrụ Jack Grealish dịka Beckham wannabe ekele ya mara mma nke a chịkọtara na foto dị n'okpuru.
Jack Grealish Ezigbo Ndụ Eziokwu
Ihapu ya mara mma, otutu ndi o choro juo ajuju; Gini mere Grealish jiri eji sọks bọọlụ yi sọks na-eyi obere ụmụaka?
Azịza ya dị mfe !!. Ele anya Grealish bụ nke sitere na nkwenye nkwenkwe ụgha nke nyere ya ọrụ. Ọ na - enyere ya aka ịnọgide na - enwe ike ịchịkwa bọl ahụ nke ọma. Grealish na-ahụkwa ya n'anya bepụ n'ọnụ ụzọ nke akpụkpọ ụkwụ ya nke na-eso ya na sọks ya dị mkpụmkpụ ma ọ bụ nwee ogologo na-agbagharị.
Nkọwa nkwenkwe Jack Grealish kọwara
Beliefdị nkwenye a ahụla ka ndị omekome na-adọ ya aka na ntị ka ọ ghara ịkwatu sọks ya na omume nke ịsụ asụsụ ụmụaka.
Jack Grealish Akụkọ nwata banyere ihe ndị ọzọ banyere akụkọ ndụ ya - Ndụ Ezinụlọ
Ezinaụlọ Jack Grealish bụ ndị Aston Villa nwere afọ ndụ niile. Ndị otu ezi na ụlọ ya dị na 6, ha niile bụ ndị amụrụ na ndị Irish gbatagburu na ndị ikwu. Otu n'ime nwanne Jack, Kevan Grealish anọghị na foto ezinụlọ dị n'okpuru.
Foto Ezinụlọ Jack Grealish. Ekele diri IG
Jack Grealish bụ otu n'ime ndị egwuregwu bọọlụ kachasị ama nke nwere nna ha dịka ndị nnọchi anya. Kevin na-ekere òkè dị mkpa na ndụ football ya. Site na mkparịta ụka dị mma na nkwekọrịta ya na ijikwa ndụ ya, ọ na-eme ya. Nwanne ukwu Jack Karen Grealish abụghị olu oke, n’adịghị ka di ya. Ọ na-ahọrọ itinye uche na ọrụ nne ya dị ala. Ma nne na nna Jack Grealish ugbu a na-enweta uru dị n'ịkụnye echiche siri ike n'ime nwa ha nwoke.
Nwanne Jack Grealish: Kpoo Kevan Grealish onye amara ama ama na ọ dị obere na nwanne Jack ka dị ndụ. Kevan dị ka nne na nna ya na nwanne ya nwanyị bụkwa onye hụrụ Villa n'anya siri ike.
Zute Nwanna Jacks- Kevan Grealish. Ebe e si nweta BMAil
Kevan emeela isi akụkọ n'oge gara aga na ọrụ ya na ịgbachitere nnukwu nwanne ya site na ihe ọjọọ ndị mgbasa ozi gwara ya. Dabere na 101GreatGoals, ọ kpọgara mgbasa ozi iji kpochapụ akụkọ nke onye nta akụkọ James Nursey nke Mirror Football onye kwuru na Grealish bụ “obi gbawara"Na"wetuo"Mgbe mmeghachite Tottenham dara.
Nwanna Jack Grealish Kevan kpuchiri enyo. Ebe e si nweta ya 101GreatGoals
Gmụnne Jack Grealish: Jack nwere ụmụ nwanyị nwanyị mara mma abụọ nwere ọmarịcha aha Holly na Kiera. Ada nke ụmụnne nwanyị abụọ ahụ, Kiera mere emume ncheta ọmụmụ 14th na ụbọchị 14 nke October 2015. Nke a site na ntinye pụtara na ọ ga-atụgharị bụrụ okenye rue afọ 2019.
Jack Grealish na istersmụnwaanyị- Holly (n'aka ekpe) na Kiera (n'aka nri). Ekele diri IG
Banyere GrandParents Jack Grealish: Ndị nne na nna Jack bụ ihe kpatara ihe nketa Irish ya. Nke ya nne nne si Sneem, obodo dị na Republic of Ireland. Jack Grealish nwekwara mgbọrọgwụ Irish site na nna nna ya nke nne na-esi Dublin abịa.
Umu nne nna Jack Grealish. Ebe e si nweta Ireland Herald. Ekele diri IG
Ọkpụkpụ Irish na-esikwa n'aka nna ya dịka nna nna ya sikwa na Ireland si na Gort, obodo dị na ndịda County Galway West nke Ireland. N'iburu nke a, ị ga - enwe ike ịchọpụta nkịta ya dị nkenke na ihe ọdịnala ya dị na Irish.
Jack Grealish Akụkọ nwata banyere ihe ndị ọzọ banyere akụkọ ndụ ya - LifeStyle
Ọ dị n'ọdịdị Jack ịchekwa ego ma tinye ihe n'akụkụ. Ọ na-ahụ na ịzụta ụgbọala ndị mara mma na Mans dị ka mmefu na-enweghị isi yana dịka agwa ọjọọ ma ọ bụ okwu nke imebi emebi. Dị ka n'oge edere, Jack na-ahọrọ ịgbaso ụzọ dị mma nke anaghị ewe nnukwu ego. Nke a bụ nkọwa nkọwa ndụ John Grealish.
Jack Grealish Eziokwu Ndụ. Ekele diri IG
Jack Grealish Akụkọ nwata banyere ihe ndị ọzọ banyere akụkọ ndụ ya - Eziokwu efu
INHALING NITROUS OXIDE: Around Eprel 2015, TheSun boro ebubo na-ebipụta onyonyo na-egosi Jack Grealish ka ọ na-a inụ ihe a maara dị ka nitrous oxide, gas na-achị ọchị, ma ọ bụ 'na-agba ọsọn'ihi nzube ntụrụndụ.
Jack Grealish ime emume ahụ. Ebe e si nweta FoxesTalk
TheSun mere ka o doo anya na ihe ahụ merenụ mere n'ihe dị ka ọnwa 6 gara aga, na omume ahụ abụghị ngwaahịa nke arụpụtara Jack na nso nso a maka klọb ya. Omume a hụrụ ka Tim Sherwood, onye bụbu onye njikwa ya dọrọ ya aka na ntị.
E zigara ya onye ozi ya: Na ụbọchị 10 nke March 2019, otu onye ama ama ama ama ama ama wakporo Grealish wakporo olulu ahụ wee wakpo ya n'oge egwuregwu Villa derby na-aga Birmingham City.
Oge na-egwu Jack Grealish wakporo Fan. Ebe e si nweta ya AnyasịStandard
Mgbe e mesịrị na ọkara nke abụọ, Grealish kwupụtara nkwupụta site n'ịgba akara iji nye Aston Villa mmeri 1 – 0. E jidere onye ahụ wakporo 27 dị afọ wee maa ya ikpe n'ụlọ ikpe ebe ọ rịọrọ ntaramahụhụ maka mmebi nke mkpọchi mkpọchi na mwakpo. A tụrụ ya mkpọrọ maka izu 14.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ akụkọ gbasara nwata anyị nke Jack Grealish gbakwunyere Untold Biography Facts. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike ka anyị mee ihe ziri ezi. Ọ bụrụ na ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.